ပထမဆုံး အကြိမ်မြင်တွေ့လာရတဲ့ Honda Civic Hatchback အသစ် ! – MyMedia Myanmar
ပထမဆုံး အကြိမ်မြင်တွေ့လာရတဲ့ Honda Civic Hatchback အသစ် !
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ နှစ်ကုန် ပိုင်းလောက်ကပဲ ဂျပန် ကား ကုမ္ပဏီ Honda ဟာ သူတို့ရဲ့ Camouflage တွေ အပြည့် ဖုံး အုပ်ထားတဲ့ စမ်းသပ်ဆဲယာဉ် တစ်စီးကို ပြသခဲ့ဖူးပြီး အဲ့ဒီ ကားကတော့ မျိုးဆက် သစ် Civic Sedan ပါပဲ။ အဲ့ဒီလို ပြသခဲ့ပြီး မကြာမီမှာပဲ Honda အနေနဲ့ Civic Prototype ကို ထုတ်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ကာ 2022 Model ကိုမှ 11th Generation အနေနဲ့ ထုတ်လုပ်လာမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ဆဲ အဆင့်ယာဉ် နဲ့ Prototype တွေ အကုန်လုံး သာ Sedan Body Style မျိုးပဲ ဖြစ်ပေမယ့် အခု ဆိုရင်တော့ 2022 Honda Civic Hatchback လည်း ဈေးကွက် ထဲကို ဝင်ရောက်လာ ဖို့ ရှိတယ်လို့ သိထား ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Hatchback ရဲ့ ဒီဇိုင်းပုံရိပ် တစ်ချို့ ကို Patent Images တွေ အဖြစ် ပေါက်ကြားလာခဲ့ အပြီးမှာတော့ Spy Photographers ‌တစ်ချို့ကနေ အဆိုပါကား ရဲ့ တကယ့်လက်တွေ့က ပုံရိပ်တွေကို မြင်တွေ့ရအောင် ကြိုးစား ဖော်ပြလာကြပါပြီ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အခု မြင်တွေ့ရတာ တွေကတော့ Civic Hatchback ကို ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် အပြင်မှာ မြင်ရတာ ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုနိုင်ပြီး စမ်းသပ် ဆဲအဆင့် အဆိုပါ ကားကို ဂျာမနီ နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ Honda ရဲ့ ဥရောပအဆင့် စမ်းသပ်တဲ့ စင်တာနားမှာ တွေ့ရှိခဲ့ရတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကား က လက်ရှိမှာ Camouflage တွေ ဖုံးအုပ်ထားဆဲ ဖြစ်ပေမယ့်လို့ ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင် အနောက်ဘက် က မတူညီတဲ့ အဆုံးသတ် ၊ အနားသတ် ဒီဇိုင်းတွေ ကြောင့် Civic Prototype ဆိုတာ တော့ သေချာ နေပါတယ်။ အဆိုပါ ကားကို သေချာ မြင်တွေ့ရတဲ့ အခါမှာ သေချာပေါက် ပြောကြား လာနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခု ကတော့ Honda ဟာ သူတို့ရဲ့ အခု Civic Generation အတွက် ဒီဇိုင်းပုံစံတွေ ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ သီးသန့်ဆန်အောင် ဖန်တီးလာနိုင် တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ယခင်မျိုးဆက်အဟောင်း ဖြစ်တဲ့ ၁၀ ခု မြောက် မျိုးဆက် Civic ‌တွေတုန်းကတော့ Outrageous ဖြစ်တဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန် တွေနဲ့ အတူ သီးသန့်ဆန်ဆန် မြင်တွေ့ ခဲ့ရခြင်း မရှိပဲ Base Model တွေ မှာတောင်မှ Si နဲ့ Type R Upgrade တွေဆိုပြီး မမြင်တွေ့ ထားခဲ့ရတာပါ။ Honda ဘက်ကတော့ အခု ကားအသစ် တွေမှာ ဘယ်လို မျိုး အင်ဂျင်တွေကို သုံးလာမလဲဆိုတာ အခုထိတော့ အတည်မပြု ပေးသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လည်း ခန့်မှန်း ရသ လောက်တော့ ပုံမှန် အားဖြင့် Aspirated နဲ့ Turbocharged Engine တွေ ကိုပဲ တပ်ဆင် သုံးစွဲလာနိုင်ပြီး အခု ၁၁ ခု မြောက် မျိုးဆက်အတွက် သေချာတာ တစ်ခုကတော့ Coupe Body Style နဲ့ ပွဲထွက်လာမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း Honda ဘက်ကနေ မတူညီတဲ့ Civic Si Hatchback အသစ်ကိုပါ ထုတ်လုပ်ပေးလာနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ပါ တစ်ပါတည်း ရှိလာ ပါတယ်။ ယခင် နောက်ဆုံး ထွက်ရှိ ထားခဲ့တဲ့ Civic Hatchback လို မဟုတ် ‌တာ တစ်ခုကတော့ ယခင် မျိုးဆက်တုန်းက UK မှာ တည်ဆောက်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ကာ ယခု မျိုးဆက် သစ် ကိုတော့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အတွင်းမှာ တည်ဆောက် ထုတ်လုပ်သွားမှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Civic ရောင်းချရမှု အနေအထား ကတော့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက်ပဲ ရှိနေတာ ကြောင့် အမေရိက ‌ဈေးကွက် အတွင်း မှာ Hatchback ‌တွေဟာ Sedan တွေထက် ပိုပြီး လူကြိုက်မများတာ တော့ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီ အနေအထား ကတော့ယခင် တုန်းက Civic တွေထဲမှာ ၆ ရာနှုန်းလောက်ပဲ ရောင်းချ ခဲ့ရပြီးဆက်လက် မထုတ် လုပ် ဖြစ်တော့မယ့် Coupe ဒီဇိုင်းတွေ အပေါ်မှာ ပိုပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှာ ရှိနေတာ ကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။ ဒါ ကြောင့် Civic Hatchback အမျိုးအစား အသစ်ကို တရားဝင် ထုတ်လုပ် ချပြလာမယ့် အချိန်ကိုပဲ စောင့်ဆိုင်းရ တော့မှာ ဖြစ်ပြီး ပုံမှန် အားဖြင့်တော့ ယခုနှစ် ၂၀၂၁ ရဲ့ နွေရာသီ လောက်မှာပဲ ဖြစ်လာ နိုင်ပါတယ်။
The post ပထမဆုံး အကြိမ်မြင်တွေ့လာရတဲ့ Honda Civic Hatchback အသစ် ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-08T17:09:41+06:30January 8th, 2021|MYCARS MYANMAR|